म विश्वास गर्छु B2B सोशल मीडिया मार्केटिंग सफलता बढ़ावा छ | Martech Zone
बिहीबार, मार्च ० 16, २०२० बिहीबार, मार्च ० 23, २०२० Douglas Karr
यस कुराकानीलाई मेरो सबै प्रमाणहरू अभूतपूर्व हो भनेर शुरू गरेर गरौं। मैले आफ्नो सहज ज्ञान प्रमाणित गर्न कुनै व्यापक अनुसन्धान गरेको छैन; मसँग अधिक र अधिक व्यक्ति मलाई फुसफुसाई गर्न जारी राख्छन् कि उनीहरू परिणामहरू ड्राइभ गर्न सोशल मिडिया प्रयोग गर्दैनन्। र ती सबै पीडित छैनन्; तिनीहरूको कम्पनीहरूले राम्रो गरिरहेछन्।
"प्रतीक्षा गर्नुहोस्!", तपाईं घोषणा गर्नुहुन्छ, "उनीहरूले यति धेरै राम्रो गरिरहेछन्!"
होईन। एउटा कम्पनीको अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बजारमा १००% भन्दा बढि YoY छ। उनीहरूको नेतृत्व र उनीहरूका कुनै पनि कर्मचारीले मिल्दो सामाजिक मिडिया उपस्थिति राख्दैनन्। तिनीहरूको नेतृत्व को विशाल बहुमत सम्मेलनहरु बाट आउँछ कि तिनीहरू विश्व भर मा उपस्थित छन्। तिनीहरूसँग भित्री बिक्री टीम छ जुन ती लिडहरूमा पछ्याउँदछ र गृह रूपान्तरणहरू ड्राइभ गर्दछ।
अर्को व्यवसायले भर्खर नयाँ अफिस स्थान निर्माण गर्यो र उनीहरूको विकासलाई स्व-फन्डि। गर्दैछ। उनीहरूसँग एक एकीकरण उत्पादन छ जुन ईन्टरप्राइज उद्योगमा कुनै प्रतिस्पर्धा छैन, र तिनीहरूले ग्राहकहरूलाई उनीहरू डेमो देखाउन सक्दो चाँडो हस्ताक्षर गर्छन्। गम्भीरतापूर्वक - कुनै सामाजिक मिडिया छैन।
म सचेतका लागि अनुगमनको बारेमा मात्र कुरा गरिरहेको छैन ... म कुरा गरिरहेको छु शून्य प्रयास उनीहरूको सामाजिक मिडिया रणनीतिहरूमा।
अर्को तर्फ, मसँग एउटा कम्पनी छ र मैले सोध्यो कि उनीहरूले केहि पनि गर्दैनन् सामाजिक मिडिया प्रमोशन किनभने यो राम्रोसँग काम गर्दछ। “तपाईंले अरू के के गर्नुभयो?”, मैले सोधें। "केहि पनि छैन, हामीलाई आवश्यक छैन।", मालिकले भन्यो। आकर्षक, त्यसैले एक मिल्दो सामाजिक मिडिया परिणाम टाउटिंग एक कम्पनीले सामाजिक मिडिया बाहेक केहि गर्दैन। कसरी थाहा पाउने यो काम गरिरहेको छ ?!
एक सहकर्मीले हालसालै मलाई भन्यो कि उनको सीएमओ हालसालै महिनौं बोर्डमा व्यभिचार मेट्रिक रिपोर्टिंग पछि राखिएको थियो। पृष्ठदृश्यहरू, अनुसरण गर्दछ, मनपर्दछ, र retweets… कुनै पनि राजस्व उत्पादन वा वृद्धि गर्न कुनै सहसंबंधको साथ।
हामीसँग एक ग्राहक छ जसले उनीहरूको सामाजिक मिडिया पराक्रम मनायो, सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरु मा एक विशाल निम्नलिखित जमा। उनीहरूको सामाजिक मिडिया नेटवर्कलाई संलग्न गर्न र हुर्काउन उनीहरूले अविश्वसनीय परिश्रम गरे। तर जब यो डेमो र डाउनलोडमा आयो, संख्याहरूसँग कहिले पनि सम्बन्ध थिएन।
मेरो अनकडाक्षट अवलोकनहरू मेरो वेबसाइटहरूमा जारी रहन्छ। जबकि म लिंक्डइनमार्फत केहि निबलहरू पाउँछु, फेसबुक र ट्विटरले उत्पादन गरिरहेका छन् शून्य राजस्व। मैले भर्खर फेसबुकको प्रबन्धक मार्फत संलग्न हुन हजारौं थप पाठकहरू परीक्षण र चलाएँ। हो .. तपाईंले यसको अनुमान गर्नुभयो। गएन।
सामाजिक मिडिया मार्केटिंगको साथ चार समस्याहरू
त्यहाँ चार समस्याहरू छन् जुन हाम्रो ठूलो सामाजिक मिडिया-श्रेयित बिक्री प्राप्त गर्ने हाम्रो क्षमतालाई चोट पुर्‍याउँछन्:
आशय - के तपाइँका फ्यानहरू र सोशल मीडियामा फलोअरहरू तपाइँलाई पछ्याउँछन् किनकि उनीहरू तिनीहरूको अर्को खरीद अनुसन्धान गर्दैछन् र तपाइँको कम्पनीको जाँच गरिरहेका छन्? मेरो अनुमान त्यो तपाइँको समग्र श्रोताको एक सानो प्रतिशत हो ... र मजा गर्नुहोस् तिनीहरू को हुन् भनेर ठ्याक्कै खोज्ने।
एट्रिब्युसन - सामाजिक नेटवर्क र तपाइँको बीचको संक्रमण विश्लेषण खाली ठाउँहरू भरिएको छ, ट्वीट वा फेसबुक अपडेटबाट आएको बिक्रीको सब भन्दा ठूलो हो। यो असम्भव छैन; यो मात्र गाह्रो छ।
Funnels - प्रत्येक मार्केटरले तपाईंको रूपान्तरण फनेल तान्न मनपराउँदछ र तपाईंलाई भन्दछ कि सचेतता र रूपान्तरण बीचमा सment्लग्नता महत्त्वपूर्ण छ। समस्या क्रम छैन; यो बीचको खाली ठाउँ हो। ग्राहकहरूले यस शान्त फनेलको कल्पना गर्छन् जहाँ सम्भावनाले पछिल्लो चरणमा छोडिन्छ। वास्तविकता धेरै फरक छ। रूपान्तरणहरू सामाजिक मिडियामा जडान गर्न माईल टाढा छन्। यो अधिकार कार्यालयमा ड्राइभ गर्न बर्ष लाग्न सक्दछ जुन तपाइँसँग हुनुपर्दछ। लगानीको धेरै थोरै प्रतिफलको साथ यो एक प्रयासको टन हो।
भियतनाम - जब तपाईं सयौं वा हजारौं हेराईहरू, मनपराउने, ट्वीटहरू, रिट्वीटहरू, सेयरहरू वा प्रतिस्पर्धा प्रविष्टिहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ यो आश्चर्यजनक हुँदैन? यसले गर्छ - हाम्रो टोलीले यो गरेको छ र हाम्रो सामाजिक मिडिया कौशलमा उच्च-पाँचदोन। समस्या, अवश्य पनि त्यो हो कि ती मेट्रिक्स मध्ये कुनैले पनि कुनै व्यवसायको लागि नेतृत्व गरेको थिएन। जब फोन बजिरहेको हुँदैन, मार्केटरहरूले ध्यान मोड्नको लागि भ्यानिटी मेट्रिक्समा देखाउँछन्।
बजारहरूले काम गरिरहेको हुनुपर्छ राजस्व संभावना पछाडि तपाईंको राजस्व कहाँबाट आउँदैछ भनेर पहिचान गर्नु तपाईंको प्राथमिकता हुनुपर्छ र त्यसपछि ती माध्यमहरू र च्यानलहरू मार्फत ड्राइभिंग व्यवसाय हुनुपर्दछ।
म भन्दै छु कि सोशल मिडियाले गर्दैन वा चलाउँदैन, मँ याद गरिरहेको छु कि म प्रायः मार्केटिंग लगानी अन्य रणनीतिहरूमा देख्छु जुनसँग लगानीमा धेरै प्रतिफल हुन्छ, धेरै कम प्रयासको आवश्यक पर्दछ, र ट्र्याक गर्न सजिलो हुन्छ।
म सोशल मिडियामा पनि छोड्दिन। मलाई थाहा छ कि ब्राण्ड जागरूकता, मान्यता, अधिकार, र विश्वास सबै महान परिणामहरू ड्राइभ गर्न सक्दछ। म केवल बहस गर्दैछु कि परिणाम सोशल मिडियामा अक्सर बढाइबढ गरिन्छ। यदि कसैले तपाइँलाई फरक बताउँदछ भने, त्यहाँ व्यापार जाँच गर्नुहोस् र जाँच गर्नुहोस् कि उनीहरूलाई कसरी भुक्तानी गरिन्छ।
मेरो अनुमान यो छ कि यो सोशल मिडिया मार्फत छैन।
टैग: विशेषणफेसबुक विज्ञापनहरूLinkedInसामाजिक संजालसामाजिक मिडिया एट्रिब्युशनtwitter
किन बजारलाई यस वर्ष तिनीहरूको टुलकिटमा CMS चाहिन्छ